Ampidino ny Mr Shooter PUBG Apk ho an'ny Android 
March 28, 2022 Janoary 16, 2022 by Reyan Ahmad
Andriamatoa Shooter PUBG dia fitaovana iray manampy anao hanenjika ny vanim-potoana PUBG-Mobile 13. Manome anao hanao kaonty marobe amin'ny fampiasana fitaovana Android tokana ianao. Manolotra anao hanao klone amin'ny PUBG-Mobile izy, PUBG Venum, ary ny fampiharana hafa rehetra koa.
Izy io dia fampiharana virtoaly Android tsotra. Izy io dia manome anao hamitaka PUBGM soa aman-tsara. Izy io dia manolotra anao hamorona kaonty vahiny ary amin'ny fampiasana io kaonty io dia tsy ho hitan'ny manampahefana ianao. Hozarainay ny momba ity app ity izay fantatray fa mijanona eto aminay.
Topimaso momba an'Andriamatoa Shooter PUBG
PUBGM dia iray amin'ireo lalao an-tserasera tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Izy io dia lalaovin'ny mpampiasa an-tapitrisany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ary matetika no manavao. Izy io dia manome endri-javatra vaovao sy mahagaga, fa manome antoka koa ny tsy ho voajirika.
Eto izahay miaraka amin'ny hacks tsotra amin'ny vanim-potoana 13. Azonao atao ny mamaky azy amin'ny alàlan'ny fampiasana Venum PUBG ary mila ity fampiharana ity koa ianao. satria ny fampandehanana an'ity fitaovana ity fotsiny dia tsy ho afaka hanondro ilay tompon'andraikitra fa mampiasa hack ianao.
Manome anao hanao klone isaky ny fampiharana amin'ny fitaovana android anao izy io. Azonao atao koa ny mampiasa azy io hanaovana kaonty Facebook marobe, kaonty WhatsApp, sy ny hafa. Raha te-hack ny PUBGM dia mila manao clone ny Venum PUBG sy PUBGM ianao.
Ampidiro Mr Shooter PUBG Apk
Aorian'ny famaranana dia mila mandalo dingana tsotra ianao amin'ny fanapahana PUBG. Mila manokatra sy manao clone ny PUBGM ianao ary PUBG Venum. Hangataka anao hamela alalana fotsiny izy, pao fotsiny avelao dia ho azonao ny klonin'io.
Ankehitriny dia mila milalao ny lalao avy any ianao satria ny fampiasana ny kaontinao ofisialy dia mety ho voarara amin'ny fampiasana hosoka. Rehefa manokatra ny Injector hahita marika Venum eo amin'ny efijery ianao, azonao atao ny mampiasa fitaka sy hacks avy any amin'ny fotoana rehetra.
Endri-javatra manan-danja amin'ny Mr Shooter PUBG
Misy endri-javatra marobe amin'ity rindranasa Android ity. Hizara ny sasany amin'ireo fiasa lehibe indrindra aho, izay hitako fa mahaliana kokoa momba ity fampiharana ity. Azonao atao koa ny mizara ny eritreritrao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra. Aza misalasala mampiasa azy.
Manaova klone amin'ny fampiharana rehetra
Azo antoka hamitahana
Ireto misy sasany amin'ireo fiasa. Afaka mahita fiasa mahavariana kokoa ianao.
Azo antoka ve ny mampiasa fampiharana Atoa Shooter?
Eny, azo antoka ny fampiasana azy. Araka ny zavatra niainanao manokana ary nolazain'ny mpandrindra fa azo antoka ny fampiasana azy, saingy tsy afaka manome anao antoka momba ny fiarovana manokana izahay. Raha vonona hampiasa azy ianao dia irery.
Ara-dalàna ve ny fampiasana ity fampiharana ity?
Ara-dalàna ny fampiasana azy mandra-panaovanao azy ara-dalàna. Fa raha mampiasa azy io amin'ny hacking ianao dia tsy ara-dalàna ny fampiasana azy. Tsy izahay no mpamorona ary tsy mampiroborobo ity fampiharana ity izahay. Mety hiteraka korontana ny fampiasana azy io tsy ara-dalàna. Mieritrereta alohan'ny hampiasana azy.
Ahoana ny fomba fampidinana rakitra Apk?
Raha te-hisintona azy dia mila manindry fotsiny ny rohy fampidinana eto amin'ity pejy ity ianao ary miandry segondra vitsy mandra-pahatapitry ny. Manome anao rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ny Apk izahay, koa aza hadino ny mampidina azy io.
Mba hametrahana azy amin'ny fitaovanao dia mila manova toe-javatra sasantsasany ianao. Izahay dia hizara ny dingana miaraka aminareo rehetra, araho fotsiny izy ireo ary ho afaka hametraka azy tanteraka amin'ny fitaovanao ianao.
Mandehana any amin'ny Settings
Safidio ny safidy Install
Andriamatoa Shooter PUBG no fomba tsara indrindra hijirihana soa aman-tsara ny PUBG. Manome anao endri-javatra maro. Azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny tanjona ara-dalàna, ary koa amin'ny tanjona tsy ara-dalàna, nefa mieritrereta alohan'ny hampiasana azy tsy ara-dalàna. Mety hiteraka korontana amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna azy io.
Sokajy Games, Tools Tags Injector, Andriamatoa Shooter, Andriamatoa Shooter PUBG, Andriamatoa Shooter PUBG Hack Post Fikarohana
Project IGI Apk Download ho an'ny Android 
Venum PUBG Apk V7.5 misintona ho an'ny Android 